développement personnel gasy – Blaogin'i Voniary
Eo ireo namana sy tapaka manohana anao, fa misy lanjany kokoa rehefa avy aminao ny hery entinao miatrika ny fiainana. Io ilay toe-tsaina mpandresy, tsy manoloana ny sedra ihany fa amin’ny fotoana rehetra. Na faly na ory ianao dia aoka hitoetra ho mpandresy hatrany. Mila kolokoloina toy ny voninkazo anefa io toe-tsaina io mba handrobona,... Lire la Suite →
Voafaoka ao anatin’io namana io ireo olona izay manohana, manoro hevitra, mananatra ary manampy anao. Mety ny iray tampo aminao, ny ray aman-dreninao, ny namanao akaiky, ny mpiray fikambanana na mpiara miasa izany. Tsy fidiny ho an’ireo singan’irery ny miatrika ny fiainana amin’ny heriny manokana. Koa aza tsinontsiniavina ny tombony azonao amin’ny fisian’ireo olona ireo.... Lire la Suite →
Fotoanan’ny fialan-tsasatra izao, maro amintsika no misintaka kely miala ny tanan-dehibe. Andramo apetraka mihitsy ange ny finday, ny "écouteur" sy ireo fitaovana teknolojia avo lenta e ! Ho hitanao fa maro ny zava-tsoa azonao araraotina any ambanivohitra. Na ny rivotra madio, na ny fahanginana, na ny fihaonana amin’ireo havana dia misy voka-tsoa eo amin’ny fiainana avokoa... Lire la Suite →